တူရကီက ကာ့ဒ်လူမျိုးစုများကို တိုက်ခဲ့ပါက စီးပွားရေးတွင် အထိနာလိမ့်မည်ဟု ထရန့် သတိပေး - Yangon Media Group
တူရကီက ကာ့ဒ်လူမျိုးစုများကို တိုက်ခဲ့ပါက စီးပွားရေးတွင် အထိနာလိမ့်မည်ဟု ထရန့် သတိပေး
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က အကယ်၍ တူရကီက အမေရိကန် ထောက်ခံအားပေးထားသည့် ကာ့ဒ်လူမျိုးစုများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါက အမေရိကန်က တူရကီကိုစီးပွားရေးအရ ထိခိုက် အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်ဟု AP သတင်းက ဇန်နဝါရီ ၁၄ရက် တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။
ထရန့်၏အမေရိကန်တပ်များကို ဆီးရီးယားမှရုပ်သိမ်းရန် ဆုံး ဖြတ်ချက်ကြောင့် ကာ့ဒ်မဟာမိတ်များကို အထိနာစေမည်ဖြစ်ပြီး တူရကီ၏တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ တူရကီက ကာ့ဒ်လက်နက်ကိုင်များကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟု သတ်မှတ်ကာ တူရကီနိုင်ငံတွင်းရှိ ကာ့ဒ်သူပုန်များနှင့် အဆက်အ သွယ်ရှိသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထရန့်က၎င်း၏တွစ်တာတွင် ကာ့ဒ်တို့အား တူရကီကို စိတ်ဆိုး အောင်သွားမလုပ်ရန် သတိပေး ပြောကြားလိုက်သည်။
အမေရိကန်၏ တပ်ရုပ်သိမ်း မှုကို စစ်ပစ္စည်းများရုပ်သိမ်းခြင်း ဖြင့် စတင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ ကြောင်း အမေရိကန်စစ်တပ်အရာ ရှိများက ပြောကြားလိုက်သည်။ သို့ရာတွင် လာမည့်အပတ်တွင် အမေရိကန်တပ်သား ၂ဝဝဝရုပ် သိမ်းရန် မရေမရာဖြစ်နေဆဲဟုဆို သည်။ အိမ်ဖြူတော်က IS ကွန် ရက်ကို ဆက်လက်ဖိအားပေးသွား မည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။
အမေရိကန်တပ်များ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါက အမေရိကန်၏စည်းရုံးမှု၊ လက်နက်တပ်ဆင်မှု၊ အကြံ ပေးမှုနှင့် ဆီးရီးယားမြေပေါ်၌ တိုက်ခိုက်မှုများကို လေကြောင်း ကူတိုက်ပေးမှုများကို ကာ့ဒ်နှင့် ဆီးရီးယားအာရပ်များအတွက် လုပ်ပေးမှု ပြီးဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းအား လွန်ခဲ့သောသုံး နှစ်ကျော်က သမ္မတအိုဘားမားအ စိုးရလက်ထက်က စတင်လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ISIS စစ်သွေးကြွများကို တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ISIS တို့နယ်မြေ အနည်းငယ်သာကျန်တော့ရာ အ မေရိကန်တပ်များ ရုပ်သိမ်းရန်အ ချိန်ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဟု ထရန့်ကတွစ်တာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အကယ်၍ ISIS တို့ ပြန်ခေါင်းထောင်လာပါက နီးစပ်ရာအမေရိကန် စစ်စခန်းများမှ တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မည်ဟု ထရန့်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အကယ်၍ တူရကီက ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါက တူရကီ၏စီးပွားရေးပျက်စီးအောင် လုပ် ဆောင်မည်ဟုလည်း ထရန့်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ထရန့်က အမေရိကန်တပ် များကို ဆီးရီးယားမှ အမြန်ရုပ်သိမ်းမည်ဟု ပြောခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်း ဖြည်းဖြည်းမှရုပ်သိမ်းမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဤသို့တပ်ရုပ်မည့်ကိစ္စအပေါ် အမေရိကန်မဟာမိတ်များနှင့် ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့တို့က ဒေါသထွက်ခဲ့ကြသည်။ ဤကိစ္စကြောင့် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဂျင်မက်တစ်လည်း နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မိုးပျံရထားလမ်း တည်ဆောက်ရန် တရုတ် မီးရထားလမ်း အင်ဂျင်နီယာဂရု(ပ်)ကုမ္ပဏီ ရန်ကုန်တိုင?
Instagram မှာ Like အများဆုံး ဓာတ်ပုံနေရာကနေ ဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ ကိုင်လီဂျန်နာ
နည်းပြဘဝစတင်ရာ ဘာစီလိုနာ-ဘီအသင်း၌ ဂွါဒီယိုလာ အဆုံးသတ်လို
ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီအား မှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျက်ပြီး ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပူးပေါင်း??
ကမ္ဘောဒီးယား အသင်းနှင့် လာအိုအသင်းကို အနိုင်ရရန် လိုအပ်၊ အုပ်စုအဆင့် ကျော်ဖြတ်နိုင်မည် ယူဆ??
ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်စွဲပြီးနောက် ချဲလ်ဆီးကို နှုတ်ဆက်တော့မည်ဟု ဟာဇက်ဝန်ခံသွားခဲ့၊ တစ်ပတ်လုပ်?